पुजाको चाहा की बाध्यता ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
पुजाको चाहा की बाध्यता ?
फिल्मी फण्डा । नायिका पुजा शर्माले फिल्म बद्रि बहादुरमा केमियो गरेकी छिन् । उनले फिल्मको एक गीतमा नाचेकी हुन् । सुदर्शन थापा प्रोडक्शनबाट हालै बाहिर निस्केर फिल्म पोई पर्यो काले मा देखिन लागेकी उनले पहिलो पटक गीतमा केमियो गरेकी हुन् ।
शोभित बस्नेतले निर्देशन गरिरहेको फिल्म बद्रिबहादुरको गीतमा उनले सलोन बस्नेतसँग कम्मर मर्काएकी हुन् । सलोन पनि केमियोमा देखिएका हुन् । सलोनलाई बुबाको फिल्ममा केमियो गर्न कुनै नौलो रहेन । तर, पुजा शर्मा कसरी राजी भईन् भन्ने प्रश्न यतिखेर शुरु भएको छ ।
निर्देशक शोभित बस्नेत पुजा शर्माको सम्बन्ध पारिवारीक जस्तै छन् । यी दुईबीच सुमधुर सम्बन्ध पनि छ । यदि बद्रिबहादुरमा शोभित बस्नेत नभई अरु कोहि निर्देशक भए सायद पुजाले केमियो गर्ने थिईनन् । शोभित भएकै कारण बाध्यताले पुजाले केमियो गर्नु परेको हो । केमियोले पुजाको करिअरमा असर पुराउने त हैन ? त्यो पछि नै थाहा होला । बद्रि बहादुरमा जयकिशन बस्नेत, छुल्ठिम गुरुङ लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : करिष्मा नेकपा प्रवेश गर्छिन् ?
फिल्मी फण्डा । राष्ट्रमा नयाँ शक्तिको खाँचो रहेको भन्दै अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरले २०७२ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको नयाँ शक्ति पार्टीमार्फत राजनीतिक यात्रा शुरु गरेकी थिइन् । तर, राजनीतिमा लागेको ४ वर्षपछि करिष्माले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेकी छिन् ।
चैत २३ गते तत्कालीन नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको थियो । उनी उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् । त्यसयता निष्क्रियजस्तै रहेकी उनले एकाएक पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरेकी हुन् ।
‘मैले मौखिक रुपमा पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेकी छु’ अभिनेत्री करिष्माले फिल्मी फण्डासँग भनिन् ‘लिखित रुपमा राजीनामा दिन बाँकी रहेको छ ।’ व्यक्तिगत केही महत्वपूर्ण कामहरु गर्नु पर्ने भएकोले आफूलाई राजनीतिबाट अलग बनाएको करिष्माको भनाई छ ।
उनले राजनिती नभई पार्टी छाड्ने निर्णय लिएको बताईन् । पार्टी परिवर्तन गर्न समाजवादी पार्टीमा आवद्ध नहुने भएको ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासमा थप कुरा नबोल्ने बताइन् । तर उनको अनुसार पार्टि त्याग गरेको तर राजनीति नत्यागेको बुझिएको छ ।
उनी निकट श्रोतले करिष्मा अब नेपाल कम्पुनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आवद्ध हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । त्यसको लागि शुरुम बाटो खोल्न उनले नयाँ शक्ती बिलय भएको समाजदावीमा राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले त्यसैको तयारी रहेको बुझिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : किस क्विन शिल्पासँग आयुष्मानको रोमान्स
फिल्मी फण्डा । यतिखेर नायिका प्रियंका कार्की नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कान्समा आफ्नो प्रस्तती पस्किरहेकी छिन् । प्रियंकका श्रीमान् अर्थात नायक आयुष्मान भने यतिखेर थाईल्याण्डमा नायिका शिल्पा मास्केसँग रोमान्समा व्यस्त छन् । नायिका शिल्पा मास्के र नायक आयुष्मान देशराजलाई रोमान्टिक मुडमा थाईल्याण्डका विभिन्न ठाउँमा देख्न सकिन्छ ।
उक्त अवस्था भने फिल्म सानो मनको छायाँकनको क्रममा रहेको छ । थाईल्याण्डको समुन्दी किनारमा गीतको दृश्यहरु छायांकन गरिएको छ । थाईल्याण्डको सुन्दर ठाउँहरुमा गीत खिचिने निर्माता राजेन्द्र मानन्धरले बताएका छन् । फिल्म सानो मनका निर्देशक सुयोग गुरुङ हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ‘छ माया छपक्कै’मा सुपुष्पा पनि
फिल्मी फण्डा । अहिले फ्लोरमा रहेको फिल्म छ माया छपक्कैमा नव नायिका सुपुष्पा भट्टको पनि अभिनय रहने भएको छ । फिल्म रणवीरबाट नेपाली रजटपटमा भित्रिएकी नायिका सुपुष्पाले पहिलो फिल्मबाटै आशा देखाएकी हुन् । फिल्म रणवीरलाई राम्रो प्रतिक्रिया मिलेको थियो । व्यवासायिक रुपमा फिल्म असफल भएपनि सुपुष्पा सबैको नजरमा पर्न सफल भएकी थिईन् । गत बर्षको नव प्रवेशी कलाकारहरुको सूचीको अग्रपंक्तिमा उनको नाम पनि नछुटाई पर्ने गरेको छ ।
उनै सुपुष्पालाई फिल्म छ माया छपक्कै समूहले पनि मन पराएका छन् । अब फिल्ममा केकी अधिकारीको साथमा नायिका सुपुष्पा भट्ट पनि रहने भएकी हुन् । रोहित अधिकारीको लगानीमा छ माया छपक्कैलाई रोहित सहित दीपक–दीपा, जितु नेपाल, केदार घिमिरे लगायतले निर्माण गर्दैछन् । फिल्मलाई संचारकर्मी समेत रहेका दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरिरहेका छन् । फिल्ममा सुपुष्पाको भुमिका के रहने वारे जानकारी भने दिएको छैन ।
यो पनि पढुहोस् : सामाजिक सञ्जाल विरुद्ध मिलन चाम्सको रिट
फिल्मी फण्डा । निर्देशक मिलन चाम्सले आफ्नो फिल्मको नकरात्मक समिक्षा गरेको भन्दै एक सामाजिक सञ्जाल विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेका छन् । फिल्मको वारेमा अश्लिल शब्दहरु प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि निर्देशक चाम्सले मुद्धा दर्ता गरेका हुन् ।
पत्रकार भेटघाट गर्दै घटनाको वारेमा उनले जानकारी गराएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय ‘मेमे नेपाल’ नामक सामाजिक सञ्जाल विरुद्ध निर्देशक चाम्सले मुद्धा दर्ता गरेका हुन् । मेमे नेपालको युट्युब च्यानलबाट अश्लिल शब्द प्रयोग गरिएको फिल्मको नकरात्मक समिक्षा अपलोड गरेका हुन् । उक्त भिडियो प्रणेश गौतमले निर्माण गरेका हुन् । निर्देशक चाम्सले सामाजिक संजालको गलत प्रयोग गरेर फिल्म असफल पार्न खोजेको भन्दै कार्वाहीका लागि मुद्धा दर्ता गरेको बताएका छन् ।
मुद्धा दर्ता पछि कानुनी रुपमा प्रक्रिया अगाडी बढ्ने काठमाडौं प्रहरी परिसरले जनाएको छ । बलिउडमा पनि फिल्म विरुद्ध दर्शकहरुले नकरात्मक र अश्लिल शब्द प्रयोग गरेर समिक्षाहरु ग्र्ने गर्छन् । त्यस पश्चात कतिपयले कानुनी सहायता लिने गर्छन् भने कतिपयले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै आफ्नो फिल्म कमजोर भएको वारे माफि माग्ने गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : पर्खाईमा चिप्लिएका पल
फिल्मी फण्डा । फिल्म वीर बिक्रम २ मार्फत चक्लेटी नायक पल शाह १४ महिना पछि पर्दामा फर्किए । आफ्नो स्टारडम र स्टार भ्यालु राख्न नायकहरुले पर्दामा आउने समयमा ग्याप राख्छन् । वीर बिक्रम २ दोश्रो सातामा प्रदर्शनरत छ । १४ महिनाको प्रतिक्षा पछि पललाई पर्दामा हेरेका दर्शकले उनी प्रति ठुलो अपेक्षा राखेका थिए । फिल्ममा उनको दमदार अभिनय होला भन्ने आशले हलसम्म पुगेका दर्शकले उनको प्रशंशा कमै गरेका छन् ।
राम्रो स्क्रिप्टको लागि पर्खिएको बताउने पलले आकास श्रेष्ठले फिल्म छाडेपछि विरको भुमिका पाएका थिए । फिल्मकी नायिका वर्षा शिवाकोटीको अभिनयको तारिफ भइरहेका छ भने पललाई नोटिस गर्ने कमै रहेका छन् । पलका डाइहार्ट फ्यान छन् । उनको बारेमा नराम्रो कुरा खबर बनेर आउने वित्तिक्कै उनका फ्यान प्रतिरक्षामा खरो उत्रन्छन् । डाइहार्ट फ्यानको लागि पलले खरो उत्रन सकेनन् । १४ महिना ठुलोपर्दाबाट हराएर व्यर्थको पर्खाइ पो बनाइदिए ।
केही राम्रो गरौं भन्ने पल नराम्ररी चिप्लिए । दुई महिनामा लेखेको स्क्रिप्टमा २ हप्तामा फिल्म खेल्न राजि भए पल । उनले १४ महिनासम्म फिल्म नखेली बस्नुको कारण त राम्रो फिल्मको प्रतिक्षा मान सकिन्छ । तर, उनले विर विक्रम २ खेल्दा प्रतिक्षा जस्तो लाग्दैन । फिल्मनै नआएर खेलेको जस्तो भान दर्शकलाई हुन्छ । अब पलले यो विषयमा सोच्ने पो हो की ?
यो पनि पढ्नुहोस् : बलिया ब्यानरका तीन फिल्म फ्लोरमा, दशैँ असपासमा क्ल्यास
फिल्मी फण्डा । वसन्त ऋतु र गृष्म ऋतु फिलम शुटिङको लागि उपयुक्त मानिन्छ । यस सिजनमा फिल्मकर्मीहरु कम मात्रामा फ्लोरमा गइरहेको खबर बीच बलिया ब्यानरका तीन ठुला फिल्महरु फ्लोरमा छन् । रमाइलो पक्ष के छ भने ती तीनै फिल्महरु दशैँ लक्षित छन् । बासुरी फिल्मसको निर्माण र सिनेमा आर्टको प्रस्तुति माउन्टेन स्टोरिज र नौमती इन्टरटेनमेन्टले सहकार्य रहने फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ सुटिङ हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङदेखि सुरु भएको छ ।
त्यस्तै दीपकराज गिरी एण्ड टिम र अशोक शर्माको इगोको रुपमा हेरिएको फिल्महरु ‘छ माया छपक्कै’ र ‘रातो टीका निधारमा’को एक्शन कट पनि एकै दिनबाट शुरु भएको छ । आमा सरस्वती मुभिज र रोहित अधिकारी फिल्मसको संयुक्त ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको फिल्म ‘छ माया छपक्कै’को एक्सन–कट् सिन्धुलीदेखि शुरु गरिएको छ । त्यस्तै, ए.ए ग्रुप अफ कम्पनीजबाट निर्माण हुने फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’को एक्सन–कट् झापाबाट शुरु गरिएको छ ।
‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ टिम
रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा बन्ने फिल्मका मुख्य कलाकारमा दयाहाङ राई, रिश्मा गुरुङ, उपासना सिंह ठकुरी, कर्मा शाक्य, माओत्से गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, कविता आले, विल्सन बिक्रम राई, बुद्दि तामाङ, लुनिभा तुलाधर, विजय बराल लगायतका रहेका छन् । मणिराम पोखरेल, अर्जुन कार्की र ओम चन्द रौनियार फिल्मका निर्माता हुन् । फिल्ममा शैलेन्द्र ध्वज कार्कीको छायाँकन, निमेष श्रेष्ठको सम्पादन र रोहित शाक्यको पाश्र्व संगीत रहनेछ । फिल्म स्वजातिय विवाह र अन्तरजातीय प्रेम सम्वन्धको अन्तरद्वन्दका कथामा बन्नेछ ।
‘छ माया छपक्कै’ टिम
दीपेन्द्र लामाको निर्देशनमा बन्ने फिल्ममा दीपकराज गिरी, केकी अधिकारी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, प्रकाश घिमिरे, रमा थपलिया लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ । त्यस्तै फिल्ममा नायिका सुपुष्पा भट्ट अनुबन्धित भएको खबर बाहिरिएको छ । फिल्ममा हरि हुमागाइँको छायाँकन, रोशन श्रेष्ठको द्वन्द्व दीपक शर्माको संगीत, विपिन मल्लको सम्पादन रहनेछ । फिल्मको कार्यकारी निर्मातामा जितु नेपाल र केदार केदार घिमिरे रहेका छन् । फिल्म ४० वर्ष उमेर अन्तरालको प्रेम कथामा आधारित भएर निर्माण हुनेछ ।
‘रातो टीका निधारमा’ टिम
अशोक शर्माको निर्देशनमा बन्ने फिल्मबाट अंकित शर्माले रजतपटमा डेब्यु गर्दैछन् । फिल्मा अंकित सहित साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, नीता ढुंगाना, खुश्बु खड्का, बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा, शिवहरी पौडेल, लक्ष्मी गिरी, बसुन्धारा भुषाल लगायतका कलाकाहरु रहनेछन् । फिल्ममा पुरुषोत्तम प्रधानले छायाँकन, मित्र देव गुरुङले सम्पादन रहने छ । अशोक शर्माले एक दशक अघि निर्माण तथा निर्देशन गरेको फिल्म ‘अल्लारे’मा समावेश सुपरहिट गीत ‘रातो टिका निधारमा’ बाट फिल्मका नाम सापटी लिइएको हो ।
तीनै फिल्मलाई घरेलु बक्सअफिसमा महत्वका साथ हेरिएको छ । छ माया छपक्कै र रातो टीका निधारमाले दशैंलाई प्रदर्शन मिति तोकेका छन् भने कबड्डी कबड्डी कबड्डीले आफू भदौदेखि तिहारसम्म जुनसुकै बेला प्रदर्शनमा आउन सक्ने फिल्मको घोषणा समारोहमा जानकारी गराएको थियो । कबड्डी कबड्डी कबड्डीको पनि टार्गेट दशैँ नै भएको र दशैँ टार्गेट गर्दै दुई फिल्मले अगाडीनै दशैँमा आउने घोषणा गरेपछि फिल्मले करिव तीन महिनाको समयावधिमा पर्व लक्षित गर्दै आफुलाई राखेको बुझिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : दीपक र अशोक बीच शुटिङदेखि नै प्रतिस्पर्धा
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्ममा कहिले काहीँ इगोले निकै प्रतिस्पर्धा गराउँछ । प्रतिस्पर्धा स्वस्थ्य र राम्रोको लागि भएत ठिकै छ । तर, फिल्ममा देखिएको प्रतिस्पर्धाहरु एक अर्कोलाई हानिकरक छ । त्यसले फिल्म क्षेत्रलाई पनि अप्रत्यक्ष नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यस्तै भएको छ, दीपकराज गिरी समूह र अशोक शर्मा टिम बीच पनि । गत बर्षको दशैंमा फिल्म छक्का पञ्जा ३ र जय भोले एक साथ दशैमा रिलिज गर्ने कुराले इगो बढेको हो । तर, पछि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दुबैको सहमतिमा एक हप्ताको फरकमा फिल्म रिलिज गर्ने निर्णय गरियो र फिल्म रिलिज गरियो । तर, इगो अझै सकेन ।
सहमतिमा फिल्म रिलिज पछि इगो सकिनु पर्ने हो । झन् बढ्न थाल्यो । दीपकराजले काईते खेल खेलेको आरोप अशोकले लगायो । र अर्को बर्ष दीपककै फिल्म लागेको दिनमा आफ्नो फिल्म लाग्ने निर्णय गरे अशोकले । वास्तवमा यो इगो फिल्म छक्का पञ्जा २ रिलिजताका वितरणको कारण भएको हो । शुरुमा अशोक शर्माले वितरण गर्ने भनिएको छक्का पञ्जा २ दीपकराज गिरी समूहले अर्कैलाई वितरण गर्न दिएपछि इगो शुरु भएको थियो । त्यसताका देखिनै अशोकको टार्गेट दीपकराज गिरी समूह रह्यो । अहिले आएर दीपकराज गिरीको टार्गेट पनि अशोक शर्मा टिम भएको छ ।
कन्फर्म दशैमा एकै दिन दीपकराज गिरी समूहको फिल्म छ माया छपक्कै र अशोक शर्माको फिल्म रातो टिका निधारमा रिलिज हुनेछ । दुबै समूह त्यहि योजनामा फिल्म निर्माणमा जुटेका छन् । प्रतिस्पर्धा पनि कतिसम्म दुबै समूहले एकै दिन फिल्मको छायाँकन शुरु गरे । जेठ ८ गते दुबै समूह फ्लोरमा निस्केका हुन् । अहिले दुबै समूहले फिल्मको छायाँकन धमाधम गरिरहेका छन् । फिल्म छ माया छप्पकैको छायाँकन सिन्धुली र काभ्रे आसपास भईरहेको छ भने फिल्म रातो टिका निधारमाको छायाँकन झापा र इलाम आसपास भईरहेको छ ।
बुझिए अनुसार दुबै समूहले छायाँकन लगतै अनलाईन सम्पादन पनि शुरु गरेको छ । यसरी प्रतिस्पर्धामा छायांकन भईरहेको दुई फिल्मले व्यापारमा कस्तो प्रतिस्पर्धा गर्ला त्यो भन्ने दशैंमा थाहा हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रचार शैली परिवर्तन गर्दै निर्माता
फिल्मी फण्डा । फिल्म निर्माण गरेर मात्र दर्शक फिल्म हेर्न आकर्षित हुँदैनन् । दर्शकलाई फिल्मका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । सही समयमा विभिन्न माध्यमबाट फिल्म सम्बन्धि जानकारी दर्शक समक्ष पुर्याउन सफल भएका फिल्महरु प्रति दर्शकको आकर्षण रहेको पाउँने गर्दछौ । सुचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र दर्शकको सुचनाको श्रोतमा परिवर्तन भईरहँदा फिल्मको निर्माण पक्षले पनि आफ्नो प्रचार सामाग्रीलाई दर्शक समक्ष पुर्याउने माध्यममा पनि परिवर्तन गर्दैछन् । फिल्म निर्माण देखि नै निर्माताहरुको ध्यान फिल्म सम्बन्धी जानकारी दर्शक सामु पुर्याउनेमा केन्द्रीत हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय फिल्मका पोष्टरहरु शहरका भित्ताहरु भन्दा पनि सोसल नेटवर्किङ साइटका वालहरुमा धेरै टाँसिन थालेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म फिल्मका पोष्टरले शहरका भित्ताहरु रंगिएका हुन्थे । हुन त आजभोली पनि पोष्टर नदेखिने त होइन । तर, ती पहिले भन्दा कम भएका छन् । फिल्मको प्रचार शैलीमा परिवर्तन देखा पर्दैछन् । पहिला फिल्म सम्बन्धि सामाग्रीहरुलाई चर्चामा ल्याउनको लागि पत्रपत्रिका, फिल्म सम्बन्धी चलेका एफ एम र टेलिभिजनका कार्यक्रम निर्माताहरुको रोजाईमा पर्ने गर्दथे । तर, आजकल फिल्म सम्बन्धी यस्ता कार्यक्रमहरु भन्दा पनि सोसल मिडिया र अनलाइन पोर्टलहरु रोजाईमा पर्न थालेका छन् ।
दर्शकमाझ फिल्मको प्रभाव पार्न र प्रचार गर्न निर्माण घोषणा गर्दा समेत पत्रकार सम्मेलन गरेर गर्ने गरिन्छ । फिल्मको शुभ मुहुर्त, शुटिङ रिपोर्ट, इन्डक्ल्याप, टिजर रिलिज, प्रोमो रिलिज, गीत रिलिज, प्रिमियर, प्रदर्शन शुरुवात लगायत बिषय वस्तुबाट फिल्मलाई चर्चामा ल्याउने प्रयास फिल्मको निर्माण पक्षले गरी रहेका हुन्छन । फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित गरेर फिल्मको निर्माण पक्षले फिल्मको प्रचार सामाग्री सम्प्रेषण गरी रहेको पनि देखिने गरेको छ ।
बहुसंख्यक मानिसको सहज पहुँचमा रहेका फेसबुकमा फिल्मको फेसबुक पेज बनाउने, फिल्म सम्बन्धि प्राप्त सकरात्मक प्रतिक्रिया पोष्ट गरि बुष्ट गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ । डिजिटल विज्ञापन प्रति निर्माताहरुको आकर्षण बढिरहेको छ । दर्शकहरु डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त भइसकेका छन् र फिल्म युनिटको लक्षित समूह नै दर्शक हुन् । दर्शकको पहुँच, आकर्षण लक्षित गर्दै फिल्म निर्माण युनिटले पनि शैलीमा परिवर्तन गर्दै अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय मोफसल यात्रा, कन्सर्ट, साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा महोत्सबहरु पनि फिल्म प्रचारको केन्द्र बनिरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : फिल्म निर्देशकको फरक प्रवृति, रजटपटलाई निराश बनाउँदै
फिल्मी फण्डा । फिल्म के को लागि बनाउने ? फिल्म क्रेजी निर्देशक भन्छन् सन्तुष्टीको लागि बनाउने । फिल्म बनाउँदा उनले सन्तुष्टी पाउँछन् । तर गुणस्तर ? सन्तुष्टीको लागि बनाइएका सम्पूर्ण फिल्म गुणस्तरिय हुँदैनन् । फिल्मलाई कला कम फगत व्यवशाय बनाउने व्यक्तिहरु फिल्म उत्पादनको मेशिन नै बन्न पुग्छन् । तर, समस्या उही गुणस्तरमा सम्झौता गरिन्छ । ‘हतारको काम लतार’ भने झैँ लतार–पतारको काम लिएर दर्शक सामु आइपुग्छन् । त्यसले न उनीहरको सफलताको बाटो कोर्न सक्छ न फिल्म क्षेत्रलाई बुट्टेदार इट्टा थप्न सक्छ । आत्मरतिमा रमाउन फिल्म निर्देशन गर्छन र आन्तरिक मनोरञ्जनमा रमाउँछन् ।
अर्का थरि निर्देशक छन् जो सानो बजेटमा स्तरिय फिल्मको अभ्यास गरिरहन्छन् । उनीहरुको लागि फिल्म कलात्मक व्यवशाय हो । कलाको बिक्रि गर्दै आत्मसन्तुष्टि कमाउनु उनीहरुको ध्येय रहन्छ । सामाजिक यथार्थपरक विषयवस्तुमा कला भर्न रुचि गर्छन र जन्मिन्छ सफल फिल्म । समाजको पात्रलाई टपक्क टिपेर फिल्मको पर्दामा उतार्ने प्रयासमा रहन्छन् ।
त्यस्तै, अर्को निर्देशकको जमात पनि छ । जो विदेशि फिल्मको क्यारेक्टर र कथा टपक्क टिपेर फिल्म बनाउँछन् । नक्कल गरिएको फिल्म फरक रहेको डंका पिट्छन् । तर, चोरेर बनाएको भन्ने प्रमाण पेश गर्दा पनि स्वीकार गर्न हिच्किचाउँछन् । चोर्ने ढंग नपुगेर हो वा सिर्जनशिलतामा विश्वास नभएर हो उनीहरु नक्कल गर्नमा नै व्यस्त रहन्छन् ।
उता सिक्वेल बनाउने निर्देशक पनि रहेका छन् । केही फिल्म बाहेकका सिक्वेल फिल्महरु सफल छैनन् । कुनै फिल्ममा दर्शकको माग अनुसार सिक्वेल बन्छन् भने कुनै निर्माण युनिट अघिल्लो फिल्म सफल भएपछि त्यसकै पथ पछ्याउँदै सिक्वेल निर्माण गर्न तयार हुन्छन् । हतार हतार सिक्वेल घोषणा गरेर सिक्वेल प्रोजेक्टलाई थन्क्याउने निर्देशकको पनि जमात रहेको छ । सिक्वेल सँग सँगै सिरिज निर्माण गर्ने निर्देशकको प्रवृति पनि रजतपटमा देखिएको अर्को प्रवृति हो । सिक्वेल वा सिरिज बनाउनु सराहनिय कार्य हो । तर, घोषणा गरेर अलपत्र पार्ने प्रवृतिले फिल्म क्षेत्रमा गफ गर्ने काम नगर्ने परिपाटीको विकासमा टेवा पुर्याईरहेको छ ।
फिल्म क्षेत्रमा निर्देशकको परिपाटीले फिल्मको सफलता र क्षेत्रको समृद्धिमा असर पार्दछ । किनकि फिल्मको क्याप्टेन निर्देशक हो । निर्देशकको कल्पनामा बनेका भिजुअल पर्दामा आउँछ । रहरै रहमा बनेका झुर र स्तरहित फिल्मले असफल फिल्मको सूचि बढाउने काम बाहेक अरु गर्न सक्दैन । फिल्म गर्ने र बीचमा अलपत्र पार्ने प्रवृति पनि मौलाउँदो छ । यसमा निर्देशकको साथसाथै अन्य कारण पनि रहेका छन् । कार्यको शुरुवात गर्ने र आएका अल्झनको बाहनामा काम बाट नै भाग्ने प्रवृतिले अरुको रोजिरोटीमा समेत असर गरिरहेको छ ।
पर्दा पछाडकिा प्रविधिकहरुको पारिश्रमिक, फिल्ममा अनुबन्धित कलाकारहरुको करियरमा असर गर्ने लगायतका समस्याहरु उत्पन्न हुन्छ । फिल्म अलपत्र पर्दा श्रम र समय खेर गइरहेको छ । निर्देशकका गलत प्रवृतिले फिल्म क्षेत्रको समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था रहेको फिल्मकर्मीहरुको बुझाई छ ।